ငါမကြိုက်ဘူး! | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 14, 2012 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 14, 2012 Douglas Karr
ဤစကားများသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူထံမှသင်ကြားရသောအဆိုးဆုံးစကားလုံး ၄ ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မျှတစွာမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းသင်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမဝင်ပါ။ လူများသည်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်နာများကိုငှားရမ်းကြသည် မဖြစ်နိုင်သော... သူတို့ရူပါရုံကိုသူတို့ခေါင်းထဲမှဆွဲထုတ်ပြီးပုံ၊ ဆိုက်၊ ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။
ပိုဆိုးတာကအရေးကြီးတဲ့အဖြေကမရှိသလောက်ပါပဲ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမအရေးပါသည်။ ဒီဇိုင်းကသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေသမျှကာလပတ်လုံးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့မာနနဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမျိုချဖို့လိုတယ်။ ဒီဇိုင်နာများသည်မယုံနိုင်လောက်သောအုပ်စုတစ်စုဖြစ်သည်။ အဆိုပါကာတွန်းနှင့်မတူဘဲ, ဒီဇိုင်နာတုံ့ပြန်ချက် (aka heckling) ကိုတောင်းရန်ရှိသည်။
သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဘယ်တော့မှ မှန်ကန်သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ပြန်လည်အပန်းဖြေပါ။ အမြဲတမ်း
သငျသညျများမှာ မဟုတ် ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့ဖြစ်ကြသည် do ဘာကောင်းလဲဆိုတာသိတယ်
ဒီဇိုင်းက မင်းအတွက်မဟုတ်။ ဒီဇိုင်းက သင့်ပရိသတ်အတွက်.
သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုဖျော်ဖြေနေစဉ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူတစ် ဦး သည်ဒီဇိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြည့်မီရန်သင်ကြိုးစားအားထုတ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်နာကိုထောက်ပံ့ပေး လွတ်လပ်ရေး ဖန်တီးမှုဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံး output ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်။
စီးပွားရေးသမားများအနေနှင့်၊ အကယ်၍ သင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ရံမှာသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်နာကိုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းကပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။ ကျနော်တို့ infographics နဲ့ sites တွေဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါလည်းလမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲငါနှိမ့်ချမိတယ်။ လမ်းထဲကလာပြီ, ဒီဇိုင်းများပျက်ကွက်။
ကြီးကျယ်တဲ့ဒီဇိုင်နာများသည်တန်ချိန်များစွာရှိသောမေးခွန်းများမေးလေ့ရှိပြီးသင်၏တုန့်ပြန်မှုအတွက်ဥပမာ၊ မူကြမ်းများနှင့်ကြားဖြတ်ပုဒ်အချို့ကိုတောင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ မင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မင်းကိုငါပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကမင်းကိုပေးဆပ်လိုက်ပြီးမင်းနဲ့အတူနေဖို့လိုတယ်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်ဒီဇိုင်းနှင့်မကိုက်ညီသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ပါ။
ပြီးတော့“ ငါမကြိုက်ဘူး” လို့မပြောဖို့ကြိုးစားပါ။
Tags: ပုံစံပုံဆွဲဒီဇိုင်းနာရုပ်ပုံinfographicကဲ့သို့web design မှာ
မတ်လ 18, 2012 မှာ 10: 22 AM
ဒေါက်ဂလပ်စ်နှင့်သင် ပို၍ သဘောမတူနိုင်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဇိုင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်၎င်းတို့၏ Adobe စက်မှုကျွမ်းကျင်မှုကိုမျက်နှာသာပေးသည်။ အရည်အချင်းရှိသောဒီဇိုင်နာသည်သူတို့၏ကိရိယာများကိုသိရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲသူတို့အလုပ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော "ဒီဇိုင်း" ကိုလည်းသူတို့သိသည်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်များမကြာခဏဒီဇိုင်းကိုသူတို့မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုအဘို့ဖြစ်၏မေ့လျော့။
တစ်ဖက်တွင်ဒီဇိုင်နာများနှင့် / သို့မဟုတ်စီမံကိန်းမန်နေဂျာများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုအရည်အချင်းပြည့်မီရန်နှင့်သူတို့နှင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံပြုရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုမည်ကဲ့သို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်ကိုအမြဲတစေမသိသောကြောင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သောဆက်သွယ်ရေးသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဒီဇိုင်နာများစွာသည်အမှတ်အသားကိုလွဲချော်ကြသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်သူတို့ပြောနေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်ဖောက်သည်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေကာမူ၊ မည်သည့်ဖောက်သည်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်မည်ကိုမူမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ငါအချို့ဖောက်သည်များလည်းဒီကိုငြီးငွေ့ဖြစ်နိုင်သည်ထင်ပါတယ်။
မတ်လ 18, 2012 မှာ 12: 43 pm တွင်
မတ်လ 19, 2012 မှာ 6: 31 AM
ကောင်းပြီ, ဖောက်သည်သူကထောက်ခံမှုရရှိသည်ဘယ်မှာအမြဲတမ်းသွားနှင့်ငါလူတိုင်းကဒီကိုသိသေချာပါတယ်။ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပြားတစ်ပြားမှမပါဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်စီးပွားရေးတွင်အရေးကြီးသောစကားလုံးဖြစ်သည်။
မတ်လ 22, 2012 မှာ 12: 26 pm တွင်
ငါဒီ tweak ဒါမှမဟုတ်ဒီ tweak ဒါမှမဟုတ်နောက်ကွယ်ကအတွေးအကြောင်းကို "ငါပြီးသားကြိုးစားခဲ့" ကဲ့သို့ပင်တုံ့ပြန်မှုရဖို့မှသာဤ tweak နှင့်ပတ်သက်ပြီးငါမေးသောအရာတစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးနောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်တို့အားငါမပြောနိုင်ပါ "ရံဖန်ရံခါနှင့်အတူချက်ချင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည် ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိအကျကိုသိမ်းဆည်းထားတယ်။ အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိုတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုပြီးနောက် Ive သည်ပစ္စည်းများကိုမမေးခွန်းထုတ်တော့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်အကောင်းဆုံးကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် Id add dont pigeon တွင်းမှာသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူသို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ကိုသူတို့ကိုလုံလောက်သောရွေးချယ်စရာများ၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုများမပေးခြင်းဖြင့်ထည့်ပါ။